July 2018 - Page 2 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 28, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah u safray dalka Eriteeriya, sida madaxtooyada Soomaaliya ay ku sheegeen bayaan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safarkiisa Eriteeriya waxa uu qaadan doonaa muddo saddex beri […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyihii hore ee ciidamada birmadka Puntland ee gobolka Mudug, ayaa kooxo aan heybtooda la garanayn ku dileen magaalada Gaalkacyo fiidnimadii Jimcada, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaank ah. Kornayl Cabdirashiid Xasan Xaashi, oo […]
Galkayo-(Puntland Mirror) Former Puntland’s military police chief of Mudug region, has been shot dead by unknown gunmen in Galkayo town on Friday, security sources said. Colonel Abdirashid Hassan Hashi, known as “Gabi Gabi”, was shot […]
July 26, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah xabsi daain ku xukuntay nin lagu eedeeyay in uu maleeshiyada Daacish u duubi jiray muuqaalada. Guddoomiyaha maxkamada darajada kowaad ee ciidamada Xasan Cali Nuur Shuute […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Masuul katirsan Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Soomaaliya ayaa lagu xiray Muqdisho maanta oo Khamiis ah kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq, sida ay ku warantay idaacada dowladda ee Radio Muqdisho, oo soo xiganaysa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shaqada ka ceyrshay Wasiirkii Waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, sida lagu seegay digreeto kasoo baxday xafiiska Raysulwasaaraha maanta oo Khamiis ah. Sida lagu sheegay digreetada, Wasiir […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa laga yaabaa in shaqada laga eryo kadib eedo musuqmaasuq, sida ilo-wareedyo ka ag dhow arrinta ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Asbuucyadii u dambeeyay, xiriirka […]
Garowe-(Puntland Mirror) The Director General of Puntland Ministry of Interior may be fired after allegations of corruption, sources close to the matter told Puntland Mirror. For the past weeks, the relationships between the Ministry of […]
July 25, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa kulan ay ku yeesheen Garoowe uga wadahadlay colaada Tukaraq. Keating oo saxaafada la hadlay kulanka kadib […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Isniin ah dib ugu soo noqday magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Masuuliyiin katirsan haayadaha dowladda ayaa Madaxweynaha ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Garoowe. […]